Asabotsy, Septambra 26, 2015 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Tsy azoko antoka ny tena lanjan'ny fijerena demografika amin'ny tranokalan'ny tambajotra sosialy rehefa tena miparitaka be ny fidirana sy ny fahasamihafan'ireo tranonkala media sosialy ireo. Ny zava-misy dia afaka mahita paosin'ny fanantenana na pundits indostrialy amin'izy rehetra ianao. Heveriko fa somary mahaliana ihany ny mahita fa misy nuansa amin'ny demografika mifototra amin'ny lampihazo.
Ao anatin'ny tontolo tonga lafatra, ny marikao dia hamorona fisian'ireo tambajotra sosialy tokana misy ary alefa ao anaty fizarana lavitra ho an'ny tsirairay. Miankina amin'ny loharanom-pahalalanao, mety tsy ho vita izany, ka safidio tsara ny tambajotranao, ary araraoty tsara ny fotoana. Michael Patterson, SproutSocial
Avy amin'ny Fampahalalam-baovao sosialy hampahafantarana paikady fizarana tsara kokoa:
58% -n'ny olon-dehibe no mampiasa Facebook. Ny demografika Facebook dia azo jerena ao amin'ny Audiens Insights.
23% ny olon-dehibe mampiasa LinkedIn. Hita tao amin'ny Pejy gazety an'ny LinkedIn.
22% ny olon-dehibe mampiasa Pinterest. Hita tao amin'ny Pew Research Center Demograpikan'ny sehatra tambajotra sosialy manan-danja.
21% ny olon-dehibe mampiasa Instagram. Ny demografika Instagram dia hita ao amin'ny Pew Research Center Demograpikan'ny sehatra tambajotra sosialy manan-danja.
19% -n'ny olon-dehibe no mampiasa Twitter. Ny fampiasana Twitter sy ny fampahalalana momba ny demografika dia hita ao amin'ny Pejy Orinasa Twitter.
Ampidirinay ihany koa ny farany Fiovan'ny haino aman-jery sosialy lahatsary avy amin'ny Erik Qualman, mpanoratra ny Socialnomics.
Tags: Erik Qualmanndemografika facebookgoogle miampy demografikademografika mifandraymba onlinedemografika pinterestsehatrademografika redditdemografika snapchathaino aman-jery sosialyhaino aman-jery sosialy demografika infographicdemografika amin'ny haino aman-jery sosialyrevolisiona media sosialydemografika twitter
Misy sanda sarobidy ho an'ny B2B ao amin'ny media sosialy